Geofumadas wuxuu kugu martiqaadayaa inaad ka ogaato qoraallada online ee ku yaal bogga IGN Spain! - Gofumed
Nofeembar, 2017 Cartografia, Internet iyo Blogs, aragti ugu horeysay
Markii hore: Qaadashada wax walba oo la xiriira joqraafiyada iyo horumarinta sawir qaadaha ee waddan kasta wuxuu abuuray hay'ado dawladeed oo mas'uul ka ah hawshan muhiimka ah. Xaaladaha qaarkood oo ku tiirsan Wasaaradda Gaashaandhigga ama midka kale ee ku saleysan jaantuska ururka gudaha ee waddan kasta, noocyada noocaas ah waxay qaadan karaan magacyo kala duwan. Sidaa daraadeed waxaan haynaa Machadka Joornaalka Milatari(IGM) ee Ecuador ama Machadka National Geographic wadamada sida Spain, Guatemala ama Peru. Qaar ka mid ah, sida Argentina, waxay ku dhasheen IGM waxayna mar dambe noqdeen IGN. Laakiin xitaa, iyada oo aan loo eegin maamulkiisa madaniga ama milatari, howlaha asalka ahi waa isku mid. "
Inkastoo intooda badan oo ka mid ah hay'adahaasi ay leeyihiin heer caalami ah oo leh bog internet, waxoogaa iyaga ah ayaa ka dhigaya macluumaad faa'iido leh oo tayo leh dadweynaha. ka sarreeya dhammaan lacag la'aan.
Taasi waa sababta, maanta waxaan soo jeedineynaa in aan samayno booqasho wakhti ah si aan u ogaano waxyaabo qaar ka mid ah IGN Spain wuxuu diyaar u yahay isticmaalaha internetka. Booqo kaas oo, adoo isticmaalaya nooc ka mid ah sawir-qaadayaasha oo aan ku wici doonno Ibero iyo ugu cusbooneysiin Post (sawirka midigta), waxaan soo booqan doonaa meelaha soo jiitay dareennadayada, taasna waxaan rajeyneynaa, inaan dhiirrigelineyno baaritaan faahfaahsan kadib. Ma waxaad na socotaa?
Si aad u gasho Ibero Waa inaan u safri karnaa meel aan ku noolahay Madrid, Spain. Gaar ahaan qaylada Calle Gral. Ibáñez de Ibero, 3 28003. Sidaa daraadeed, waxaanu hagaajinaynaa suumanka suunka, waxaanan bilaabeynaa. Isgoysyadu waa dhakhso badanaana dhowr ilbiriqsi ka dib waxaan ku dhignaa meel.
Waxaan nimid dib-u-dhac la'aan. Waxaan hoos u degeynaa, waxaana ku hareereysan dhismooyin lakabyo leh. Qiyaasaha soo socda iyo kuwa soo socda. Dariishado yaryar oo muraayadaha cad cad dhamaystiran. Waxaan ka sii gudubnaa hareeraha wayn oo aan ka horeyno albaabka. Waxaan galnaa Waxaan ula imaanay ujeedo qeexan, sidaa darteed, ka dib marka ogolaansho u dhigma, waxaan tagnaa aagga daabacaadda. Waxay tilmaamayaan in ay jiraan siyaabo toos ah oo toos ah oo ay halkaas ugu tagaan. Waanu qadarinaynaa soo jeedinta iyo dareenkeennu waxa uu diiradda saareeyay helitaanka gaaban. Haddii aan adeegsanay 'khariidad caadi ah' oo loo fidiyay dadweynaha waxaanu sidan u iman karnaa:
Muujinaya macluumaadka la keydiyay
Iyadoo rajo badan aynu u tagnay meeshii loo qoondeeyey iyo ka dib markii la marayay waddo, waxaan helay saddex albaab, mid kasta oo leh calaamad muujinaysa. Waa in aan dooranaa midka ku bilaabma. Waxaan ku bilaabaynaa midka bidix:
a) Albaabka Buugaagta
Waxaan horey ugu jirnaa shelf taasoo kor u qaadeysa tirada tiradeeda mar kasta oo gaar ah. Nuqullada ayaa sidan lagu muujiyay:
Waqtigan xaadirka ahi waxay leedahay 28 koobiyo Waxaa loo akhrisan karaa oo lagu soo daabici karaa lacag la'aan qaabab kala duwan.
Talada Koowaad: Magacyadoodu waxay daboolayaan meelaha kala duwan iyo danaha, waxaan tixgelinnaa in ay faa'iido u yeelan karto kala sooc nuqulada la soo bandhigay, tan oo ah gargaar si loo fududeeyo raadinta:
Falanqaynta iyo wararka · Dhibaato, caalamiyeynta iyo isu-dheellitirka bulshada iyo dhulka ee Spain
Shaxanka · Isbaanishiyaalaha Isbaanishka ah
· Taariikhda sawirrada sawir qaadashada
· Dunida khariidadaha
· Qaadashada sawirada dhulka ee dalka Spain. Mashruuca SIOSE.
Joduusiye iyo Astronomy · Arrimaha Astronomy
· Qiyaasta Dunida u dhaxaysa 1816 iyo 1855
Taariikh ahaan · Daraasooyinka Mawduuca-Qodobada ee Guddiga Tirakoobka ee degmada Almería (1867-1868)
· Daraasooyinka Mawduuca-Qodobada ee Guddiga Tirakoobka ee Degmada Soria (1867-1869)
· Qorshaha Magaalooyinka ee Granada oo kor u qaaday shirweynaha guud ee tirakoobka (1867-1868): mashruuc aan la dhammaystirin
Mashruucyada Qaran ee Qaran ee Mashruuca Qaranka ee qarnigii lixaad. Wakiilada dhulka ee Castilla y León
· Khariidadaha iyo sawir qaadayaasha ee dagaalka sokeeye ee Spain (1936-1939)
· Qorshaha Madrid ee qarnigii 19aad
· Taariikhda xuduudaha xuduudda Isbaanishka iyo Faransiiska: laga bilaabo Heshiiska Pyrenees (1659) ilaa heshiisyada Bayonne (1856-1868)
Waxyaabo kala duwan - Sheekooyinka Sahan Baabuurka ah
· Safarka Sierra de Segura
· Badda badda ilaa Venus
Xeerarka Tilmaamaha Istaandarada
· Qodobka Latin American ee LAMP Metadata 2 Version
Maqnaanshaha · Sheeko ku saabsan faafinta mawjadaha seismic. Hirarka Lg
· Cusbooneysiinta khariimada khatarta dhulka ee Spain 2012
IDEE - Macluumaadka Muuqaal Aqoonsi · Shirka III Iberian ee ku saabsan Dhaqdhaqaaqa Macluumaadka Muuqaalka (2012)
· Shirka IV Iberian ee ku saabsan Dhaqdhaqaaqa Macluumaadka Muuqaalka (2013)
· Horudhaca Dhaqdhaqaaqa Macluumaadka Muuqaalka
· IDEE Blog, boostada 1000
· Mabaadi'da Hawlaha Muuqaalka Macluumaadka Muuqaalka
Aqoonsi · Tilmaamaha guud ee isticmaalka caalamiga ah ee loogu talagalay tifaftireyaasha maabka iyo daabacado kale
· Aqoonsiga: Heerarka MTN25. Fikradaha aasaasiga ah iyo eraybixinta
Mug kastoo wuxuu leeyahay "warqad liis" oo la socda sharaxaad kooban oo ku saabsan mawduuciisa iyo xogta sida qoraaga, Taariikhda daabacaadda iyo Tirada bogagga. Marka magaca la doorto, waxaanu helnaa qaababka la heli karo iyo helitaanka "nuqul " waxaa ka mid ah Wax fudud, sax?
Talo labaad: Aynu qaadano laba buug oo ka hadlaya aragtiyadayada. Waa hagaagsanahay waa jacaylkeena khariidadaha sidaa daraadeed doorashadayada koowaad maahan wax la yaab leh. Doorashada labaad waxay la xiriirtaa waayo-aragnimada shaqadayada. Aynu aragno:
World of Maps Waxaa lagu gartaa akhriska fudud iyo fahamka. Haddii aan eegno tusmada guud, waxaan ku aragnaa qaab dhismeed oo si wanaagsan u qaabeysan mawduucyada. Fikrad ahaan sida qoraalka tixraaca ee bilowga bilowga iyo sidoo kale bilaabi. Dhab ahaan lagula taliyay. Ku faani.
Sheekooyinka sahan beeraha oo ku yaalla qaybta kala duwan, buuggan akhriska ku raaxaysan wuxuu na siin karaa waqti wanaagsan, waana hubaal inoo xusuusineynaa sheekooyinka nool ama maqalay shaqaalahayaga. Iyo inkasta oo loola jeedo inaanan dhicin dib u soo kabashada, akhris sidaan oo kale ah ayaa naga caawin kara in aan nasasiino waqtigeena firaaqada. Ku fariisow buugga.
b) Warqadaha Aqbalaadda
Warqadaha IGN iyo CNIG waxaa loogu talagalay inay faafiyaan waxqabadka hay'adda. Helitaanka qaabka PDF, ugu dambeyntii la daabacay waa laga bilaabo bisha Sebtembar. Sida la rajeynayo, waxaad heli kartaa lambarradii hore oo aad dooran karto sanadka iyo ka dib bisha oo warsidaha la doonayo.
c) Albaabka Daabacaadda
Waxaan wajahaynaa albaabka ugu dambeeya ee safaradeena fool-maroodiga ah. Waxaan ku nasannaa daqiiqad intaan sii socon. Waxay tilmaamayaan in qolkan ugu dambeeya waxaa jira macluumaad badan. Aan aragno Waxaan galnaa Waxaan ku jirnaa afar qol. Aynu bilowno:
c-1) Warbixinta Hawlaha. Haddii aad rabto inaad hesho warbixinta sanadlaha ee hawlaha ay fuliyeen IGN iyo CNIG, tani waa meesha saxda ah. Waxan ka codsanaynaa arrintan oo waxay tilmaamayaan in dukumiinti ugu dambeysay ay ka timaad sanadka 2015.
c-2) Daabacadaha iyo Warqadaha Seismic. Hubaal waa qolka ku jira macluumaadka ugu badan. Cilmi-baadhayaasha cilmi-baaristu waxay ku faraxsan yihiin halkan shaki la'aan. Waxay u baahan tahay "qotodheegan qotodheer" oo ku jira qaybta afarta (4) kala duwan:
Warbixinnada iyo Daabacadaha kale
Barashada dhulgariirrada keli ah
Sida horudhac yar, waxaan kuu ogolaaneynaa inaad fiiriso waxyaabaha ku jira "Warbixinnada iyo daabacadaha kale" shelf:
c-3) Machadyada Juqraafiyeed: Barnaamijka Aasaasiga ah iyo Bibliyografiyada (sanadka 2008). Meelahan waxay ka kooban tahay manhajka asaasiga ah iyo buug-gacmeedka lagu taliyey si loo caawiyo diyaarinta si loo helo fikradaha sida Engineer Juqraafiyeed. Dib-u-eegista sawir-qaadashada waxaad ka heli kartaa helitaanka dukumiintiyo kala duwan oo lagu daabacay internetka. Kuwa raba inay dib u eegaan fikradaha waxaa lagu martiqaadayaa dib u eegis dhamaystiran:
c-4) Calendars. Ma rabtaa inaad hesho jadwalka sannadka soo socda iyo dukumintiyada qoraalada? Waa hagaag, IGN waxay ku siineysaa mid ka mid ah xusuusta booqashadaada. Aad ayaan uga mahadcelinaynaa waxaanan soo jeedinaynaa: Qaado fursadda!
Waxay ahayd safar dheer, oo aan shaki ku jirin, marka laga hadlaayo, waxay neceb yihiin naxariis badan oo nagu casuumaya inaan soo laabano marka aan rabno, taas oo aan ku faraxsanahay. Hadda waa inaan soo celinno oo ka tagnaa Ibero. Xisaabin Waxaan ku soo laabaneynaa dhacdo la'aan. Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay dalxiiska oo xiiso iyo wax barasho. Xasuuso in cinwaanka yahay www.ign.es. Ilaa fursad cusub!
Post Previous«Previous Shir-sannadeedka Saddexaad ee Is-bahaysiga Cadawga Maraykanka iyo Nidaamka Kaydinta Dhulka
Post Next Sidee loo soo dejisan karaa AutoCAD 2018 - qaybta waxbarashadaNext »